Ikhaya IZITOLO ZAMAHHALA WE-AMERICAN SOCCER Amaqiniso we-Giovanni Reyna Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso
Yebo, kuthiwa "Captain America“. I-athikili yethu ikunikeza isembozo esiphelele sendaba kaGiovanni Reyna Yobuntwana, I-Biography, Amaqiniso Womndeni, Abazali, Ukuphila Kwasekuqaleni, Indlela Yokuphila, Ukuphila Komuntu kanye neminye imicimbi ephawulekayo kusukela lapho ayeseyingane kuya lapho ethandwa khona.
Impilo kanye nokuvuka kukaGiovanni Reyna. Isikweletu Sezithombe: SI
Yebo, wonke umuntu uyazi ukuthi ungumdlali wasemuva oyingqayizivele onamathemba amahle. Kodwa-ke, bambalwa kuphela ababheka inguqulo yethu ye-Giovanni Reyna's Biography ethakazelisa impela. Manje, ngaphandle kokuqhubeka kwesikhathi, ake siqale.
UGiovanni Reyna's Indaba Yengane:
Enye yezithombe zokuqala zobuntwana ezaziwa kakhulu zikaGiovanni Reyna. Isikweletu Sezithombe: SI.
Ukuqala, UGiovanni Alejandro Reyna wazalwa ngosuku lwe-13 lukaNovemba 2002 edolobheni laseSunderland eNgilandi. Ungowesibili ezinganeni ezine azalwa ngunina uDanielle Egan Reyna nakuyise uClaudio Reyna.
Yize uGiovanni azalelwa eYurophu, waziwa kabanzi njengezwe laseMelika ngoba wasebenzisa ingxenye engcono yokukhula kwakhe ebuntwaneni ekhula eNew York City kanye nomfowabo omdala, uJack kanye nezingane zakubo ezincane - uJoah noCarolina.
Izithombe zobuntwana zikaGiovanni (kwesokunxele kwesobunxele) Ukukhula eNew York kanye nabafowabo nodadewabo. Isikweletu Sezithombe: SI.
Ukukhulela eNew York, uGiovanni wayengumgadli wemvelo ongazihluphi futhi owayenakho konke okwakudingeka ukuze kuqhubeke kunoma yiluphi uhlobo lwethrekhi nezehlakalo zensimu. Eqinisweni, wayenentshisekelo yakuqala kumdlalo wegalofu futhi wayengakwazi ukufaka i-basketball ngaphambi kokuba abe neminyaka emi-5.
Ngesikhathi uGiovanni ekugcineni eneminyaka eyi-5 ubudala, waqala ukudlala ibhola kumapaki kwathokozisa abazali bakhe ababejabule kakhulu lapho indodana yabo yesibili isho isasasa lebhola futhi bayisebenzisa njengomunye wemidlalo yakhe yobuntwana.
UGiovanni Reyna's Ingemuva Komndeni:
Yebo, ubaba kaGiovanni nobaba bakhe babengeyena ompofu kepha injabulo ababenayo emidlalweni yakhe yebhola ebuntwaneni yayifanelekile njengoba bobabili abazali benomlando ocebile ngokudlala lo mdlalo. Ukuqala ngomama kaGiovanni, wayengumakadebona webhola lezinyawo futhi eyilungu leqembu lesizwe labesifazane e-United States. Isithombe esingezansi isithombe esihle sabazali bakaGiovanni Reyna (uClaudio noDanielle Egan).
Hlangana nabazali bakaGiovanni Reyna. Isikweletu Sezithombe: SI.
Ngakolunye uhlangothi, ubaba kaGiovanni wayebuye abe-United States yamazwe omhlaba onomlando odlalela iGlasgow Rangers, iManchester City neSunderland lapho kuzalwe khona indodana yakhe yesibili. Ngakho-ke, bekungokwemvelo nje ukuthi bajabulele isifiso sikaGiovanni sokunyathela izindlela zabo ekwakheni umsebenzi kwezemidlalo.
UGiovanni Reyna's I-Education ne-Career Buildup
Lapho isikhathi silungile, uGiovanni osemusha futhi ozifiso waba yingxenye yohlelo lweNew York City Football Club (NYCFC) lapho aqala khona umsebenzi onobuchule kwezemfundo yebhola.
Waba yingxenye ye-NYCFC esemncane kakhulu. Ama-Image Credits: i-NYCFC ne-SI.
Ukuqonda isifiso sabo somfana sokudlala ibhola ukuze baziphilise, abazali bakaGiovanni Reyna (uClaudio noDanielle Egan) benza konke okusemandleni ukusekela izifiso zakhe. Ngenkathi uGiovanni efunda lo mkhakha, wayinaka kakhulu imiyalo futhi akatholakalanga ukuthi akanakho ukukhula ngokomzimba nangokwengqondo. Eqinisweni, wayengumdlali webhola lezinyawo omangalisayo owayazi ukuthi unekusasa eliqhakazile ebholeni.
UGiovanni Reyna's Iminyaka Yokuqala Ebholeni:
Ngakho-ke, ukukhuphuka kukaGiovanni ezinhlwini kwakushesha futhi okubaluleke kakhulu kukufanele ngoba ubaba wakhe - uClaudio wayengumphathi wezemidlalo we-NYCFC kodwa akazange asebenzise isandla eside ekuqhubekiseni izifiso zobugovu zentsha.
Ngakho-ke, inqubekela phambili kaGiovanni ibisobala futhi iyathandeka kontanga yakhe nakubaqeqeshi abathola ukuthi ungumuntu onemvelo onamathemba azokwenza ukuthi i-academy iziqhenye ngokuzayo.
Ikusasa eliqhakazile likaGiovanni kwezemidlalo lazibonwa phambilini ngabalingani bakhe nabaqeqeshi e-NYCFC. Isikweletu Sezithombe: I-Instagram.
UGiovanni Reyna's Indaba Yendlela Yodumo:
Ekuphakameni kwemidlalo yeGiovanni kwezemidlalo e-NYCFC, wenza kahle kakhulu ukusiza iqembu lakhe ukuthi linqobe indebe yeGeneration Adidas ngo-Ephreli 2017, umqhudelwano owabona ngaleso sikhathi oneminyaka engu-14 ubudala futhi uphuma njengomdlali ohamba phambili.
Yini enye? UGiovanni uqhubeke nokusiza ama-U15s e-US ukuthi awine umqhudelwano wentsha ohlonishwayo weTorneo Delle Nazioni futhi waba nokuqedela okuqinile ngo-2017/18 nge-NYCFC ngokushaya amagoli angama-13 kokuvela kwezingu-17.
Ungambona phakathi kwethimba eliqoqa udaka? Isikweletu Sezithombe: I-Instagram.
I-Gioganni Reyna's Biography- Indaba yeRise To Fame
Ngokwenza okuhle kangako, bekungamangazi ukuthi iBorussia Dortmund ayichithi sikhathi ekutholeni izinsizakalo zabadlali abamaphakathi. Waqale wenziwa wadlalela iqembu laseJalimane i-U19s ngo-2019/20 ngaphambi kokuthola ukunyuselwa eqenjini lokuqala leqembu ngesikhathi sekhefu lasebusika.
Lapho enza idokhumenti lakhe leBundesliga iBorussia Dortmund, bekurekhodwa ngemuva kwerekhodi likaGiovanni othukuthele I-Christian Pulisic ngokuba ngumncinyane waseMelika owake waba khona eBundesliga.
Ubuwazi ukuthi uGiovanni ubuye waba ngumshayi magoli omncane kunabo bonke emlandweni weNdebe yaseJalimane lapho ethola ngemuva inetha lapho ihlulwa ngo 2-3 kuWerder Bremen ngesikhathi seDFB-Pokal Round ka-16?
Kuphinde kube futhi ngemuva kwezinsuku eziyi-15, uGiovanni waba ngumncane kunabo bonke eMelika ukudlala futhi aqopha osizayo kuChannel League njengoba eseqala umdlalo U-Erling Håland's inhloso yokuthola umdlalo ukusiza iBorussia Dortmund iqophe umlando ngokunqoba ngo 2-1 kwiPSG. Bonke abanye, njengoba bekusho, ngumlando.
Bona ukuthi ngubani owanikeza u-Erling Håland usizo olwenze uDortmund wanqoba. Isikweletu Sezithombe: Inhloso.
UGiovanni Reyna's Ntombi?
Abathandi bezindaba nabezindaba abajabule neze ukuthi uGiovanni umane enza izindaba ngokudlala kwakhe ibhola okuhlaba umxhwele kanye nesikhala sokwenza amarekhodi. Njengoba kunjalo, bafisa kakhulu ukwazi ngentombi yakhe noma ukuthola ukuthi unomfazi oyimfihlo yini.
Ngeshwa, lezo zifiso zizoqhubeka zihlale isikhathi eside njengoba uGiovanni eneminyaka engu-17 kuphela ubudala ngesikhathi sokubhala le-biography futhi akanandodana (amadodakazi) noma indodakazi (yakhe) ngaphandle komshado.
IGiovanni encane, ephumelelayo nenhle ayishadanga ngoFebhuwari 2020. Isikweletu Sezithombe: I-SI ne-LB.
Akungatshazwa ukuthi umdidiyeli akabheki ukuba nentombi noma unkosikazi njengento eza kuqala. Lokhu kuza njengoba ezimisele ngokuqinisa isikhundla sakhe neqembu lokuqala leBorussia Dortmund. Ngakho-ke, ukubeka igama lakhe emabhalweni wezinhlwayi ezincane zebhola ukuze uqaphele eminyakeni eyishumi ezayo yebhola lezindiza eziphezulu.
UGiovanni Reyna's Impilo Yomndeni:
Kuliqiniso elingenakuphikwa ukuthi umndeni ongena kwezemidlalo uhlala ndawonye. Kulesi sigaba, sizokulethela amaqiniso ngamalungu omndeni kaGiovanni aqala nabazali bakhe.
Ukwazi impilo yomndeni kaGiovanni Reyna. Isikweletu Sezithombe: Instagram
Okuningi Ngobaba kaGiovanni Reyna:
UClaudio Reyna ungubaba womdlali wasesiswini. Ukwahlulela ngegama lakhe, ungaqagela kalula ukuthi unezimpande zemindeni ezingewona amaNgisi. Iqiniso liwukuthi, Ubaba kaGiovanni Reyna “Claudio"Inemvelaphi yomndeni wase-Argentina nowasePortugal. Njengabadlali bezingcweti ababezosebenza, uClaudio wabamba iqhaza elikhulu kwezokuqeqeshwa kobusha bukaGiovanni futhi waba nesandla ekukhuphukeni kwakhe ebholeni lasekhaya eliphakeme.
Okuningi mayelana noMama kaGiovanni Reyna:
Omama bezemidlalo abakhulu bakhiqize amadodana ezemidlalo futhi umama kaGiovanni Reyna akayona into eyehlukile. UDanielle Egan Reyna ungumdlali webhola lezinyawo laseMelika osethathe umhlalaphansi, owake wadlalela iqembu lesizwe labesifazane e-United States ngo-1993. Okufanekiselwe ngezansi noGiovanni (indodana yakhe), bobabili bahlanganyela isibopho esiyingqayizivele.
Okuningi mayelana noMama kaGiovanni Reyna, uDanielle Egan. Isikweletu: I-Instagram
Mayelana Nezihlobo Nezingane ZamaGiovanni Reyna:
Umdlali wasesiswini unazo izingane zakubo ezintathu akhule nazo. Bahlanganisa umfowabo omdala kaJack kanye nabafowabo abancane - uJoah noCarolina.
njengoGiovanni, uJack wayenezintshisakalo zakuqala zebhola kanye ne-basketball kepha wahlaselwa umdlavuza wobuntwana okwaholela ekufeni kwakhe kungazelelwe lapho eneminyaka engu-13 kuphela ubudala. Ukhulume ngabazakwabo bomdlali wasekhulile osele, umfowabo omncane uJoah unesifiso sokupheka kanye nebhola ngenkathi kuyindodakazi yomndeni okuwukuphela kwayo - uCarolina ungene emidlalweni eminingana ngesikhathi ebhala i-Biography kaGiovanni Reyna.
Isithombe somdlali wasemuva nonina, ubaba kanye nezingane zakubo. Isikweletu Sezithombe: SI.
UGiovanni Reyna's Impilo Yakho:
Ukuqhubekela phambili empilweni kaGiovanni kude nebhola, une-persona ecebile ekhombisa izimfanelo ezithandekayo, ezinembile, zokuvelela nokuvelele kwabantu onesibonakaliso se-zodiac esinguScorpio.
Umdlali wasesiswini owembula ngobuhlakani amaqiniso ngempilo yakhe yangasese neyomuntu siqu, unezintshisekelo nezinto zokuzilibazisa ezibandakanya ukudlala igalofu, ukugcina imidlalo ye-basketball nokuchitha isikhathi sekhwalithi nabangane bakhe nomndeni.
Lesi isithombe esingavamile sikaGiovanni odlala igalofu ngokuzilibazisa. Isikweletu Sezithombe: I-Instagram.
UGiovanni Reyna's Indlela yokuphila:
Mayelana nendlela yokuphila kaGiovanni, inani lakhe elifanele lisabhekwa ngesikhathi sokubhalwa kepha linani lemakethe le- € 6 million. Ngonani elinjalo, kusobala ukuthi umdlali wasemaphakathi akuyona umgcini omkhulu noma umchithi omkhulu.
Ngakho-ke, kunzima ukubona umdlali wasesiswini ephila impilo yokunethezeka yabalingani bakhe abahamba emigwaqweni yaseJalimane bezimoto ezixakile nezinezindlu ezibizayo. Ngaphandle kwalokho, ugqoka kahle ngokweqile ukuya emicimbini ekhethekile nephathi nabangane.
Akusikho ngaso sonke isikhathi lapho ubona abamaphakathi begqoka ngokwezitayela kodwa uGiovanni uyakwenza. Isikweletu Sezithombe: I-Instagram.
UGiovanni Reyna's Amaqiniso:
Ukugoqa indaba yethu yobuntwana kaGiovanni Reyna kanye ne-biography yakhe, nazi amaqiniso amancane angaziwa noma angaziwa ngaye.
Iqiniso # 1 - Ukwehlukaniswa Kweholo:
Kusukela aqala ukungena enkundleni yebhola eDortmund, abalandeli abaningi bathathe izintambo ku-inthanethi bezokwazi ukuthi uhola malini uGiovanni Reyna. Iqiniso li, tuhlasela inkontileka yabadlali abaphakathi ne-BVB embona ehola umholo ohola phambili € 600,000 ngonyaka. Okumangaza kakhulu ngezansi ukwehla komholo kaGiovanni Reyna ngonyaka, inyanga, usuku, ihora, umzuzu namasekhondi (njengasikhathi sokubhala).
Imali etholwayo kuma-Euro (€)
Umholo kuPound Sterling (£)
Imholo ku-United States Dollars ($)
Umholo Ngonyaka € 600,000 £ 522,767.12 $ 669,501.00
Imholo Ngenyanga ngayinye € 50,000 £ 43,563.9 $ 55,791.75
Amaholo Ngeviki ngalinye € 12,500 £ 10,890.98 $ 13,947.9
Imholo Ngosuku Lunye € 1,785.7 £ 1,555.85 $ 1,992.56
Umholo Ngehora ngalinye € 74.4 £ 64.83 $ 83.02
Imholo Ngomzuzu ngamunye € 1.24 £ 1.08 $ 1.38
Imivuzo Ngomzuzwana € 0.02 £ 0.018 $ 0.02
Lokhu kungakanani Giovanni Reyna okutholile selokhu waqala ukubuka leli khasi.
Uma okubonayo ngenhla kufundeka (0), kusho ukuthi ubheka ikhasi le-AMP. Manje Chofoza LAPHA ukubona ukunyuswa komholo wakhe ngemizuzwana.
Uthi bewazi?… Indoda ejwayelekile eJalimane idinga ukusebenzela okungenani iminyaka 1.1 ukuze uzuze € 50,000, okuyimali uGiovanni Reyna ehola ngayo ngenyanga.
Iqiniso # 2 - Ama-tattoos:
Kuyabonakala ukuthi uGiovanni akanabo ubuciko bomzimba ngesikhathi sokubhala. Uthanda ukugqwayiza isikhumba esingenabala ekuphakameni kwakhe okumaphakathi kwamamitha ayi-6 no-1 inch.
Impela ubukeka kahle ngaphandle kwama-tattoos. Isikweletu Sezithombe: I-Instagram.
Iqiniso # 3 - Ukubhema nokuphuza:
UGiovanni akabhemi noma aphuze ngokunganaki. Njengomuntu ochwepheshe, ukuqaphela kwakhe isidingo sokuhlala enempilo futhi ebukhali ngazo zonke izikhathi ngezinhloso zakhe ezinhle.
Iqiniso # 4 - Isilinganiso seFIFA:
UGiovanni unesilinganiso esingahlaba umxhwele kakhulu se-FIFA esingu-63 njengoba kwenzeka ngoFebhuwari 2014. Ngaphandle kwalokho, akukho okuchithekayo ukuthi izilinganiso zakhe zenzelwe ukwanda kwe-meteoric. Lokhu kungenxa yokuthi unezinyanga ezimbalwa nje isipiliyoni sokudlala ibhola lezinyawo eziphezulu ngesikhathi sokubhala.
Kukhona njalo isiqalo sokuthobeka. Isikweletu Sezithombe: I-SoFIFA.
Iqiniso #5 - Inkolo:
Umdlali wasesiswini akamkhulu enkolweni ngesikhathi sokubhala. Ngakho-ke, ukuthonya kwakhe ezindabeni zokholo akunakuchazwa ngokuphelele. Ngaphandle kwalokho, kungenzeka ukuthi kungenzeka ukuthi abazali bakaGiovanni Reyna bamkhulisa ukuba amukele izinkolelo zobuKristu.
Ukubuza kukaGiovanni Reyna Wiki:
Lelithebula elingezansi linikeza imininingwane esheshayo nengasho lutho ngeGiovanni Reyna.
Amaqiniso we-Giovanni Reyna Biography (I-Wiki Enquiry)
Igama eligcwele: UGiovanni Alejandro Reyna
Isiteketiso: Captain America
Bazali: UDanielle Egan Reyna (Umama) noClaudio Reyna (uBaba)
Abafowethu: UJack Reyna (uLate), uJoah Reyna
Udadewethu: UCarolina Reyna
Umsuka Womndeni: Imvelaphi yomndeni wase-US, wase-Argentina nowasePortugal
Indawo akhulela kuyo: EBedford, eNew York.
Indawo Yokuzalwa: ISunderland, eNgilandi.
Ukuphakama: I-6 no-1 ku (1.85 m)
Umsebenzi: Kuhlasela umdlali wasesiswini
QAPHELA QAPHELA: Siyabonga ngokufunda i-Giovanni Reyna yethu Yobuntwana Indaba ye-Plus Untold Biography Amaqiniso. At LifeBogger, silwela ukunemba nokungakhethi. Uma uthola okuthile okungabukeki kulungile, sicela wabelane nathi ngokubeka amazwana ngezansi. Sizohlala sazisa futhi sihlonipha imibono yakho.
I-Raphael Guerreiro Ingane Yendaba Yobuntwana I-Untold Biography Amaqiniso
Ama-Achraf Hakimi Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso
I-Andriy Yarmolenko Ingane Yendaba Yobuntwana I-Untold Biography Amaqiniso
U-Alexander Isak Ingane Yenganekwane Plus Untold Biography Facts
Thomas Tuchel Indaba Yobuntwana Plus Untold Biography Facts
I-Jadon Sancho Ingane Yabantwana Ingane Plus Untold Biography Facts
I-Sokratis Papastathopoulos Ingane Yabantwana Ingane Plus Untold Biography Facts
Ivan Perisic Intsha Yendaba Indaba Plus Untold Biography Facts
Usuku olushintshiwe: Septhemba 3, 2020
Mario Gotze Ubuntwana Indaba Plus Untold Biography Facts
Usuku olushintshiwe: Septhemba 15, 2020